एनसेलको ‘दामी क्यासब्याक’ योजना « Amsanchar
काठमाडौँ, ७ पौष । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष २०२१ को उपलक्ष्यमा आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘दामी क्यासब्याक’ योजना ल्याएको छ । यो योजनाले ग्राहकलाई ५० र १०० रुपैयाँको प्रत्येक रिचार्जमा पाउँदै आएको भन्दा बढी मेन ब्यालेन्स पाइने सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ ।
यो योजनाअन्तर्गत ५० रुपैयाँ रिचार्ज गर्ने प्रत्येक ग्राहकले कम्तिमा हाल पाइने रु. ४९.०२ भन्दा बढी अर्थात् रु. ५१ मेनब्यालेन्स प्राप्त गर्छन् । त्यसैगरी रु. १०० को रिचार्जमा अब कम्तिमा विद्यमान रु. ९८.०४ भन्दा बढी रु. १०२ मेन ब्यालेन्स पाउँछन् । यो योजना पुस १९ गतेसम्म लागु हुनेछ ।
योजनाअवधिमा रिचार्ज गर्ने प्रत्येक प्रिपेड ग्राहकलाई बढी मेन ब्यालेन्स प्रदान गरिने यो योजनाको प्रमुख विषेशता हो । रु. ५० रिचार्ज गर्ने ग्राहकले यो योजनामा अधिकतम रु. १०० सम्म मेन ब्यालेन्स प्राप्त गर्न सक्छन् र त्यसैगरी रु. १०० रिचार्ज गर्नेले रु. २०० सम्म मेन ब्यालेन्स पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
क्रिसमस तथा नयाँ वर्ष २०२१ को अवसरमा ग्राहकलाई रिचार्जमा थप मेन ब्यालेन्स सुनिश्चित गर्दै यो आकर्षक योजना ल्याउन पाएकामा निकै हर्षित रहेको कम्पनीले जनाएको छ । रिचार्ज कार्ड, भर्चुअल फन्ड ट्रान्सफर (भीईफटी) तथा अनलाइन जुन कुनै पनि माध्यमबाट गरिएको रु. ५० र रु. १०० को प्रत्येक रिचार्जमा यो थपमेन ब्यालेन्सको लाभलिन सकिने एनसेलले जनाएको छ ।